Wararka - Sidee loo doortaa dahabka kulanka sanadlaha ah?
Markay tahay Iiddii Guga ayaa imanaysa, maxaa loo diri doonaa TA si ay uga farxiso xitaa indhaheeda ku dhoolla caddeyso? Lingling wuxuu kuu sheegayaa in dahabka jawharadku ku filan yahay. Macnaha dahabka kaladuwan wuxuu u taagan yahay jacayl kala duwan ereyo sir ah. Ma sheegi kartaa in TA qiyaasi karto sax?
Silsilad - jacayl
Gabarkee ma jecla jacaylka? Kaliya waqtiga saxda ah, u dir silsilad si taxadar leh loo xushay. Marka lagu daro 'jacaylka jacaylka' isku sheega ah, silsiladda ayaa sidoo kale leh lakab kale oo jacayl ah, "Waxaan rabaa oo keliya inaan si adag qalbigaaga ugu xidho silsiladda oo aan dadka kale iga qaadin." Baahinta noocaas ah ee xasaasiga ah iyo xukunka ayaa qalbigeeda macaaneysa.
Crystal pink budada macaan oo aan dufan lahayn, sida xiriirka macaan ee u dhexeeya labadooda, waxaa jira ubax qurux badan oo ku tiirsan, crystal Jade taxanahan silsiladda jaadka ee mosaic ah ayaa aad ugu habboon saaxiibbada.
Jijin - Masuul
Gabdheehee aan rabin jacayl waara? Waxaa laga yaabaa in booskeeda qalbigaagu yahay mid aan la beddeli karin, oo dareenkaagu sidoo kale waa mid culus oo daryeel leh. Si kastaba ha noqotee, waa inaad muujisaa naftaada, u sheegtaa, una oggolow inay dareento xasilooni. U dir jijin, oo macnaheedu yahay "badbaadi jacaylka," oo muujineysa rabitaankeeda inay ku xirto nolosheeda oo dhan iyo inta ka dhiman nolosheeda.
Way kafiican tahay in loo diro jijinteeda ametustos, ametustos waa "dhagaxa ilaaliyaha jacaylka", oo macnaheedu yahay qaab wanaagsan, fudud oo rogrogmi kara, sidaa darteed iyadu waa ka qurux iyo qurux badan tahay.
Siddo - U garaac jaceyl
Gabarkee ayaan rabin inay hesho ballanqaad nololeed? Hadday iyadu tahay qofka keliya ee aad doonayso inaad "fartaada ku hayso, oo ay gabow ku sii hayso," ha u oggolaan inay in badan sugto, giraan u xidho, una muujiso sida ugu daacadsan uguna daacadsan ereyga "iyada jecla. Qalbigayga, waxaan diyaar u ahaan lahaa inaan ka quusto jacaylkeeda, ”anigoo siinaya guur farxad leh.
Xidho giraan ruby ​​ah oo qaab eg, oo aad iskaga oggolaanaysaan midba midka kale jacaylkiisa iyo ballanqaadkiisa.
Dabbaaldeg, u soo dir iyada qurxinta qurxinta qurxinta
Hadiyaduhu waa qurux badan yihiin oo macno leeyihiin
Waa muhiim in laga farxiyo
Maxaa ka habboon tan?
Waqtiga boostada: Jun-20-2018